Zvigadzirwa fekitori - China Zvigadzirwa Vagadziri nevatengesi
Iyo cryogenic tangi yekuchengetera yakatwasuka kana yakatwasuka yakapetwa kaviri-isina vhuvhu yakadzivirirwa tangi yekuchengetera yekuchengetera mvura oxygen, nitrogen, argon, kabhoni dhayokisaidhi uye mamwe midhiya. Basa guru nderekuzadza nekuchengetedza tembiricha yakadzika mvura. Zvikamu Zvidiki Zvekuchengetera Tangi, Vertical Kuchengetera Tangi Iyo cryogenic yekuchengetera tangi yakamira kana yakatwasuka yakapetwa kaviri-rukoko vharuvhu yakasimwa tangi yekuchengetera yekuchengetera emvura okisijeni, nitrogen, argon, carbon dioxide uye imwe midhiya. Basa guru nderekuzadza uye ...
Horizontal cryogenic yekuchengetera tangi Pasi peyakanaka kugona uye kumanikidza, yega yega cryogenic yekuchengetera tangi yakanyatsoenzaniswa kuchengetedza mari uye kupfupisa nguva yekuendesa. Mazhinji bhaudhi-pane modular sarudzo anopihwa kuti asangane akawanda ekushandisa zvinodiwa. Tsanangudzo yakaunzwa Runfeng inopa yakajairwa gasi yekuchengetedza matangi mune maviri magadzirirwo, akamira uye akatwasuka, aine yakanyanya kubvumidzwa kushanda kumanikidza emamirioni 900 kusvika ku20,000 (3,400 kusvika 80,000 litita). 175 kusvika 500 psig (12 kusvika 37 barg). Under yakanaka capa ...
Nhanganyaya ye ansuda Ansuda diki cryogenic mvura yekuchengetera tangi rudzi rwemidziyo diki gasi inosanganisirwa neyakagadzika base uye yakakwira vhoriyamu yakawanda-yakasara adiabatic cryogenic yemvura yekuchengetera tangi uye yakagadzirirwa cryogenic mvura yekuzadza uye yekuzvimanikidza yavo vaporization masisitimu. Zvikamu: Ansuda, Diki Yekuchengetera Tangi Parizvino, Ansuda diki cryogenic yemvura yekuchengetera tangi, seyakareruka uye inyore nyowani gasi rekupa modhi inotsiva masirinda esimbi neDewars, rave richishandiswa zvakanyanya pa h ...
Nzira ina dzakabatana ST-10C
Yakajairika Slotted Dzimba Kubvaruka Dhisiki (LF Rudzi)
Yakajairika Slotted Domed Rupture Disk ine yakasarudzika metaltop chikamu uye yekuisa chisimbiso lining. Kana kumanikidza kwakanyanya kuchiitika pane inodzivirirwa sisitimu, diski inoputika ichitevedza mitsetse yakatetetwa kuti izadzise kuzarura kwakazara. Mhando Dzakatenderera Yakajairika Yakabvarurwa Yakagadziriswa Rupture Dhisiki (LF) Zvimiro zvakagadzirirwa gasi, mvura, guruva basa. Kunonyanyisa kushanda kumanikidza kusvika makumi masere muzana muzana Zvishoma zvidimbu paburs ...